Burburinta deegaanku waa baaba’a (Dadka) Ummadda
W/Q: Maxamed Maxamuud Ducaale
In kasta oo ay aad muhiim u tahay kheyraadka dhulka ay bulsho haysato, hadana waxaa ka muhiinsan maskaxda iyo cilmiga Aadanaha oo hadba agaasima kheyraadka ay ummad waliba haysato.
Haddii uu wadan hodan ku yahay kheyraad isla markaana dadkiisu aysan lahayn karti ay kaga faa’idaystaan oo baahi iyo haraadba ay qabaan, waxaa dhaama waddan aan kheyraad badan lahayn laakiin dadkiisu si quman u fekero. Sida la ogyahay ummad walba waxa ay ka toostaa ama ka dib dhacdaa hoggaanka oo ummadaha nasiibka leh waxaa u kaca hogaamiyaal ay dalkooda iyo dadkoodaba laxajeclo ka hayso, hoggaanka ummad walba waxa uu bulshada u yahay Qalbi Nabigeena suuban calayhi salaam waxa uu yiri “jirka beni aadamka waxaa ku jira cad (gobol yar) oo hilib ah haddii uu wanaagasnaado jirkoo dhan ayaa wanaagsanaada haddii uu xumadana waxaa xumaada jirkoo dhan waana qalbiga”. Kaalintaas cadkaas uu Nabigeena NNKH uu tilmaamay waxaa ummadda ugu jira hogaamiyaha, kaasoo haddii uu wanaagsanaado ummadda inteeda kalana ay hagaagayso haddii uu xumaadana ummadda inteeda kale ay xumaaneyso.
Soomaaliya waxaa hogaamiya dad ku faanaya aqoon darrada, iyo maamul xumada taas oo baylihisay deegaankii iyo kheyraadkii dalkeenna
Allow hogaan wanaagsan oo dadka iyo kheyraadkeena u tura na sii amiin.
Nolosha Aadanaha guud ahaan waxaa Alle sabab uga dhigay waxyaabaha ay quutaan iyo hawada ay qaataan oo loo yaqaano (flora and fauna) oo macnaheedu yahay dhirta iyo deegaanka. Horumar kasta uu Aadanuhu gaaro waxaa saldhig u ah hadba heerka ay gaarsiiyaan dhirta iyo xoolaha. Marka labadaas qeybood la horumariyana waxaa horumara guud ahaan nolosha Aadanaha.
Tusaale, dalka Maraykanku waxyaabaha uu aduunka intiisa kale kaga horumaray waxaa ka mid ah waxsoosaarka beeraha iyo xoolaha, arintaasina waxa ay keentay in ummadda Mareykanku ka horumarto ummadaha kale.
Dalka Hindiya wuxuu ka mid ahaan jiray dalalka ugu daran ee la liita faqrinimada, laakiin markii shacabka dalkaasi garwaaqsadeen in horumarinta deegaanka lagu gaari karo horumar buuxa ayay lixdameeyadii Hindiya bilowday waxa loo yaqaan “kacaanka Cagaaran” (Green revolution) taasoo macnaheedu ahaa in la kobciyo wax soosaarka beeraha, maanta Hindiya waxa ay ka mid tahay waddamada dhaqaalahoodu sida aadka ah uu u kobcay sanadihii la soo dhaafay laguna tilmaamay inay ka mid noqotay waddamada xaga warshadaha ka horumaray.
Haddaba deegaanka Soomaalidu muxuu maanta ku sugan yahay
Waxaa hubaal ah in dalkeenna Alle ku manaystay deegaan isku dheeli tiran (ecology balance) iyo cimilo aan is beddel badan lahayn kuleyl iyo qabow, intaa waxaa inoo sii dheer carrosan wax soosaar wanaagsan duunyaduna ku taranto hase yeeshee, si iimaan iyo naxariis la’aan ah ayaa loo baabi’iyay dhirtii muhiimka ahayd waxaana loo keensaday makiinado casri ah oo muddo gaaban xaalufin kara dhul aad u balaaran. Waxaa si aad ah loo beegsaday si dhuxul looga shido geedaha waaweyn sida Hareeriga, Bilcilka, Maraaga, Reydabka,Tuugaarka, Quraca, Dheenka, Qansaxa, Galoolka, Meygaaga, Lebiga IWM.
Dhulkii la geed qaaday waxaa ka kacay bacaad ku fiday dhulkii dhoobooyda ahaa oo beeraha laga tabci jiray ama cowsleyda ahaa oo ay ku tiirsanayd daaqsinta Geela iyo Geesleyba (Lo’ iyo Ari) waxaana hoos u dhacay wax soo saarkii beeraha, si kastaba ha ahaatee, haddii geedihii lajarayo isla markaana uu bacaad ku fidayo beerihii oo aysan muuqan cid wax ka qabata kuwa burburinta deegaanka wada soow ma muuqato Bar iyo Beer la’aan iyo mustaqbal madow. Waxaa intaa sii dheer dhirtii la jaray bacaadkii ka kacay waxaa uu qarka u saran yahay in uu kala jaro wadooyin muhiim ah sida waddada isku xirta Kimaanyo iyo Muqdisho.
Xoolihii waxa ay waayeen daaq, roob la’aan loo aaneynayo dhirta la jaray ileyn dhirtu roobka ayay soo jiidaaye ayaa dhacay, nacfi yarada dadka iyo duunyadaba haysata waxaa sii dheer waxaa la waayay geed milicda qoraxda laga harsado ama laga dugsado gabaddanada dhaxanta. Dhallinyaradii xoogga u ahayd dhaqaalaynta xoolaha waxay u soo yaaceen xagga magaalada waxayna u xaroodeen qabqableyaal ka tanaaday dhiiga dhallinyarada. Dhanka kale, waxaa la waayay dowlad kala tacaasha cudurada xoolaha, xoolihii ummada waxay ku dhaw yihiin in mar dhow laga soo fariisan doono ceyrnimo.
Si kastaba arintu ha ahaatee waxaa cad in dadka Soomaaliyeed aysan dareensaneyn qatarta ka imaan karta dhirta oo la jaro ama lagubo. Waxaa tusaale wanaagsan inoo ah dhacdadaan oo ah arin dhab ah oo dhacday.
Nin Geelley ah iyo wiil uu dhalay ayaa waxa ay ku tashadeen in aysan iska iibin Geellooda sanadkan, waxyaabaha ay u baahan yihiina ay ka shaqeystaan in dhirta dhuxul laga shido si loo baajiyo in neef la iibiyo wiilku Geella ayuu ilaaliyaa, Aabuhuna geedihii Geellu daaqi lahaa ayuu sii gubayaa mana oga in uu Qatar ku hayo Geelliisa,
Dhacdo taa lamida waxa ay tahay dadka dhuxusha ka shidaa Gobolka Shabeelada hoose lacagta ay ka helaan dhirtii ay gubeen waxa ay ku iibsadaan xoolo, oo waxaad maqlaysaa Geelii ama lo’dii dhuxulayda waa yaabe haddii ay u taagan yihiin gubida dhir jirtay dhowr boqol oo sano xaggee buu doonayaa in uu xoolaha ku dhaqo.
Soomaliya waxa ay ka mid ahayd wadamada duurjoogta caanka ku ah markii la waayay qorshe ummaddeed duurjoogtii waxaa lagu baabi’iyay xabad cadowtooyo oo macno la’aan ah iyadoo qaar iimaan laaweyaal ahna ay u dhoofiyeen dibadaha ugaartii caanka ahayd sida Baciidka, Deerada, cowsha, Goodirka waxaa kale oo dibada loo raray shimbiro badan intii ka fakatay xabadana wax ay u hayaameen wadamada dariska ah sida Kenya oo ay u gudbeen Geri iyo Maroodiyo Badan.
Badeenna waxaa lagu daadiyay qashinka sunta ah kaas oo halaag u geystay noolihii. Badeenna waxaana u soo kaluumeysi tegay caalamkoo dhan oo waxa ay waliba qaadeen ugxantii Kaluunka si uusan dib ugu tarmin ileyn waa meel aan cidana lahayne. Dhibaatooyinka aan laga soo kaban Karin waxaa ka mid in godadkii kaluunku ku dhalijiray ee xeebta ku dhawaa ay maraakiibta shisheeye burburiyeen. Godadkaan waxa ku tarmijiray kaluunka la’aantoona kaluunku ma tarmaya waxaana halis ah in kaluunku raadsado goobo kale oo uu ku tarmi karo.
Dhibaatada baddu kuma koobna tan ay shisheeyuhu nagu hayaan ee waxaa jira burcad badeed Soomaaliyeed oo badda ka dhigay tan ugu qatarta badan aduunka oo dhan. Qatarta baddu waxay keentay dhibaatooyin adag sida sicir barar aan horay loo arag iyo in gargaarkii la soo gaarsinwaayo dadka u baahan taas oo ay u dheer tahay masiibooyinkii uu shacabku la daalaa dhacayey ee dagaallo aan kala go lahayn, baahi, cuduro iwm.
Dhibka ay keeni karto burburinta deegaanka oo si wanaagsan loogu sharaxo Xoolo dhaqatada, wax garadka iyo hogaamiyeyaasha qabaa’ilka waxay qeyb ka qaadan kartaa badbaadinta dhirta fara kutiriska ah ee hartay.
Haddaba si wax looga qabto arintaas waxaa muhiin ah in culumada Soomaaliyeed ka soo saaraan fadwo ku saabsan baabi’inta deegaanka iyo waxa diinta Islaamku ka qabto maadaamaa haddii dhirta la baabi’iyo aanay nololi suura galay. Waxa ay tahay aragtideydu haaddii culumada Soomaaliyeed fadwo ka soosaaraan jarida dhirta laguna wacyi geliyo shacabka Soomaaliyeed in taasi horseedi doonto in buldhooyinka deegaannada la baabi’inayo ku nooli ay hor istaagi doonaan mashruuca baabi’inta deegaanka Soomaaliyeed kadib marka ay u caddaato in nolosha dadku la dhimanayso tan dhirta.
Mohamed Mohamud Duale